Neymar Jr Oo Dabka Ku Sii Shiday Wararkii Sida Xoogan Ula Xidhiidhinaya Barca kadib markii uu soo dhigay barahiisa bulshada muuqaal uu ku sheegay “Haa Haddaba Barcelona Ayaan Joogaa” – The Voice of Northeastern Kenya
Neymar Jr Oo Dabka Ku Sii Shiday Wararkii Sida Xoogan Ula Xidhiidhinaya Barca kadib markii uu soo dhigay barahiisa bulshada muuqaal uu ku sheegay “Haa Haddaba Barcelona Ayaan Joogaa”
Laacibkii hore ee Barcelona Neymar Jr ayaa muuqaalka hoose soo raaciyay qoraalka uu ku sheegay: “Haa Haddaba waxaan joogaa Barcelona” muuqaalkan ayaa wuxuu neymar ka soo baxay isgoo qoslaayo islamarkaana faraxsan,wuxuuna neymar waqti la qaatay xidiga xulkiisa ee hada Barcelona ka tirsan Arthur Melo.
Neymar Jr ayaa la sheegay in uu si xun uga qoomamaynayo go’aankii uu Barcelona kaga tagay isla markaana uu ciyaartoyda kooxdiisii hore ee Barca uu uga sheekeeyay xaalada uu PSG ku galay iyo waliba sida uu ugu qaldanaa go’aankii uu Camp Nou kaga dhaqaaqay sanadkii 2017.
Ma aha markii ugu horaysay ee uu laacibkan ku tago magaalada Barceloona booqosho oo uu waqti cajiib ah ku soo qaatay balse waxaa jiray waqtiyo hore oo uu xitaa booqday xarunta tababarka Barcelona.
Hasa hate waxaa sii xoogeysanaya in aanu ku faraxsanyahay magaalada Paris iyo inkale.
Neymar Jr ayaa fariinta muuqaalkan dabka ugu sii shiday warbaahinta Spain ee sheegayay in laacibkan reer Brazil uu ku soo laabanayo horyaalka Spain ee La Liga inkasta oo ay ku qaybsanaayeen kooxaha Barcelona iyo Real Madrid midka uu ku soo biiri doono.
Xidigan ayaa wararkii hore ku tilmaamay kuwa been abuur ah oo uu ku sifeeyay “Fake News” balse muuqalkan uu barahiisa bulshada soo dhigay ayaa cadeyneysa in laacibkan uu ku fikiraayo
Neymar Jr ayaa shalay muuqaal kooban oo uu barihiisa bulshada ku shaaciyay waxa uu wararkii hore ku tilmaamay kuwo been abuur ah oo uu ku sifeeyay “Fake News” balse markan waxa uu cadeeyay in uu sidii uu Barcelona ugu soo laaban lahaa.
Si kastaba, Neymar Jr ayaa wali saaxiibo badan ku leh kooxda Barcelona waxaana jooga Coutinho oo ay tan iyo carruurnimadoodii saaxiibo ahaayeen, Arthur iyo waliba xidigaha ay sida wayn isku soo fahmi jireen waqtigiisii Camp Nou ee Messi iyo Suarez.
Lama oga haddii uu Neymar Jr booqan doono Lionel Messi oo dhaawac soo gaadhay isla markaana gacanta ka jabay waxayna u badan tahay in uu gurigiisa ku booqan doono si uu xaaladiisa u soo arko maadama oo uu horeba booqashooyin ugu sameeyey Messi, Suarez iyo Rakatic.
← Cristiano Ronaldo oo Xalay noqday Laacibkii ugu horreeyay ebid 5 horyaal ka dhaliya 400- gool
DHAGEYSO Xaafadda Pangani oo laga dhisayo guriyo qiimo hoose lagu deganaan karo →